पहिलो जन्मिएको संकुचन कसरी सुरु हुन्छ - संवेदन?
जानिन्छ, सामान्य प्रक्रियाको सम्पूर्ण अवधि3चरणहरू हुन्छन्, जुन लामो समय सम्म गर्भ गर्दनको उद्घाटन हो । यो पहिलो झगडा को उपस्थिति संग शुरू हुन्छ र माथि गर्दन को पूर्ण प्रकटीकरण सम्म जारी छ। माथिल्लो महिलाहरु मा यो लगभग 8-10 घडी सम्म रहन्छ, र ती व्यक्तिहरुलाई बारम्बार जन्म दिनुहोस - 6-7। यस चरणमा नजिकको दृष्टिकोण लिनुहोस् र पर्भरियर्सहरू कसरी संघर्ष सुरु हुन्छ र तिनीहरूका अनुभवहरू कुन अनुभवको बारेमा कुरा गर्छन्।
श्रमको पहिलो चरणको अन्तिम चरण
यो नियमित, तालमेल झगडाको स्थापनाको साथ सुरु हुन्छ, जसको आवृत्ति 8-10 मिनेटमा 1-2 भन्दा बढि हुन्छ। एकै समयमा, प्राइपिपारसहरूमा पहिलो संकुचन, लाइटको रूपमा सुरु हुन्छ, पेटको निचो आधामा दुखाइको दुखाइ, जुन लुम्बेर क्षेत्रलाई दिन सक्छ।
लम्बाइ चरण औसत6घण्टा सम्म पुग्छ। यो गर्दन को छोटो संग समाप्त हुन्छ, जसमा गर्भाशय को गर्भाशय को उद्घाटन हुन्छ।
सक्रिय चरण कसरी हुन्छ?
4 सेन्टमा गर्भधारण गर्दनको उद्घाटनको साथ, श्रमको पहिलो चरणको सक्रिय चरण सुरु हुन्छ। एक नियमको रूपमा, यो सक्रिय श्रम गतिविधिको विशेषता हो। यो समयमा धेरै महिलाहरु अत्यन्तै कष्टकारी संक्रामक अनुभवको अनुभव गर्न थालेका छन्, जो प्राइपिपारमा लागी औषधि को परिचय हुन सक्छ जसले मांसपेशिहरु लाई स्पेस र राहत दिन्छ।
यस चरणको सुरुमा, प्राइपिपारका संकुचनहरू एक सानो फ्रिक्वेन्सी सँग मनाईन्छ - 10 मिनेटमा5पटक। यस अवस्थामा, निस्सन्देह मुख्यतया निम्न पेट मा दुखाइ देखिन्छ। महिलाको ठूलो गतिविधिको साथ आफूलाई (हिड्ने, उभिएको), संकुचनको तीव्रता नाटकीय रूपमा बढ्छ। प्रायः यस चरणमा, प्यर्वरले एनासिस्टिक र एन्टिस्पेसोडियाको साथ इन्जेक्ट गर्नु पर्छ।
भ्रूण मूत्राशय को स्वतन्त्रता मुट्ठी को ऊँचाई मा हुन्छ, सर्वे को शुरुवात 7-8 सेमी हो। साथ नै, बच्चा को टाउको को नहर को साथ अग्रिम मा शुरू हुन्छ। यस अवधिको अन्त्यमा, फिर्योक्सको पूर्ण उद्घाटन गरिन्छ, र टाउको सर्भिस फ्लोरको स्तरमा कम हुन्छ।
गतिशीलता चरण गर्भाशय ग्रीवा को उद्घाटन को अंतिम अवधि हो
यस समयमा, गर्दन 10 सेन्टीमिटरसम्म खोल्छ, जुन यसले भ्रूणको लागि सम्भव बनाउँछ। महिलाले आफैंलाई प्रभाव पार्न सक्दछ कि जन्म प्रक्रिया रोकिएको छ। यो 20 देखि 80 मिनेट सम्म रहन्छ। नियमको रूपमा, यो चरण reproducers मा अनुपस्थित छ।
प्राइपिपारालाई कसरी बुझ्न सकिन्छ, कि तिनीहरूले संकुचन सुरु गरे?
प्रायः प्राय जन्मनु भन्दा पहिले, लगभग 3-4 हप्तामा, धेरै महिलाहरूले यस्तो घटनाको अनुभव गर्न थाले जस्तै प्रशिक्षण बआउटहरू। यदि भविष्यमा आमाहरू जो दोस्रो र पछिल्ला बच्चाहरूसँग गर्भवती हुन्छन् यो व्यावहारिक रूपमा यससँग कुनै पनि महत्व जोड्न सक्दैनन्, त्यसमा प्रायः प्रायः सामान्यहरूलाई सामान्य लाग्छ। बच्चाहरु जन्मनु भन्दा पहिले देखाइएकाहरूबाट अलग गर्न, यो जान्न आवश्यक छ कि प्रशिक्षकहरू बढ्न सक्दैनन् र कुनै पर्वतारोही छैन, उदाहरणका लागि। कुनै पनि समय हुन सक्छ।
Primipara मा संघर्ष को संवेदना को अनुसार, उनि व्यावहारिक रूप देखि अनुभव गर्ने देखि फरक छैन महिलाहरू फेरि जन्म दिन्छन्। यद्यपि, तथ्यलाई हेर्ने कि प्रिमपारा पहिलो पटक उनीहरूको जाँच गर्छन्, उनीहरूले उनीहरूलाई बढी रंगीन रङ लगाउन सक्छन्, डाक्टरको कुरा गर्छन्।
यसैले, यो भन्न सकिन्छ कि अतिप्रार्थ महिलाहरु मा श्रम को शुरुवात संवेदनाहरुमा समान छ जुन तिनीहरू मासिक भन्दा अगाडी अनुभव गर्दछन, तर उनि अधिक तीव्र र व्यक्त हुन्छन्। तथ्यलाई ध्यान दिनुहोस् कि प्राथमिकपारहरुमा गर्दन को गर्दन को प्रकटीकरण को अवधि लामो छ, यो जरूरी नहीं कि अस्पताल को जाने को पहिले उपस्थिति संग जान सकिन्छ। यो समयको लागि पर्खनु पर्दछ जब उनीहरूको आवधिकता 8-10 मिनेट पुग्छ। यस अवस्थामा, बच्चाहरु लाई जन्मदिन को लागि महिला तैयार गर्न को लागि बाधाओं को पर्याप्त समय हुनेछ।
जन्मे पछि कति पटक म स्नान गर्न सक्छु?
बच्चा जन्मे पछि मासिक रूपमा किन छ?
अगाडिल्लो आकृति कहाँ छ?
जन्म पछि पेट पेट दुख्छ
जन्मजात बच्चा मा एक epidural के छ?
10 जन्मजात मिथकहरू
सीजेरेस डिलीवरी पछि पोषण
छोराछोरीको पछि लागी स्तन कसरी बहाल गर्ने?
डर्क डेलिभरको अगाडि प्रस्थान
डिलीवरी पछि गर्भाशय को क्षुद्रग्रह
गर्भपतन पछि गर्भपतन पछि
शॉक: XVII शताब्दीमा एक नुन द्वारा लिखित "शैतानको पत्र", बुझिएको थियो!
क्रेनबेरी कसरी उपयोगी छ?
बायाँ हातमा शरारती सानो औंला
ब्याट्री ड्रेस गर्नुहोस्
बच्चाहरु को लागि स्तनपान
कोट शैलीहरू 2014
कुकुर खानाको दर्जा
Foldable समुद्र तट छाता
बेकन मा चिकन
पोशाक आभूषण च्यानल
भान्सामा पर्खालहरूको सजावटी प्लास्टर
रोल्याण्ड एमिमरले "आजादी दिवस: रिवाइल" को प्रीमियर को पूर्वमा एक साक्षात्कार दिए
स्टाइलिश छोटो कपालकोट 2014
शकीरा यूरोभाइज गाउ प्रतियोगिता प्रतियोगिता 2017 मा हुनेछ
मशरूमको साथ पनीर सूप
बे सञ्झ्यालको लागि कुन्नीहरू
ग्रीनहाउसमा कसरी मरिच पानी
पाखुराको मासुको पकाएको मासु - नुस्खा
पेटको पापीलाइटिस - यो के हो?
आर्थरग्लिया - लक्षणहरू